नेपालका २२ लाख बढी यूवामा मानसिक समस्या ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
नेपालका २२ लाख बढी यूवामा मानसिक समस्या !
काठमाडौँ, २१ फागुन, नेपालमा करीब २२ लाख बढी यूवा मानसिक समस्याबाट प्रभावित रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी हुने गरेको पाइएको छ । ५ यूवामध्ये १ जनामा मानसिक समस्या देखिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । युवाहरुमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको यस तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । विश्वमा वर्षेनी ३० करोड डिप्रेशनसको शिकार भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको तथ्यांक छ ।
परिवार र समाजले स्वीकार गर्नु भन्दा लुकाउन खोज्दा मानसिक समस्या बढ्दै गएको मनारोग विशेषज्ञ डा. अरुणराज कुँवरले बताए । उनका अनुसार मानसिक तनावका कारण थुप्रै रोग लाग्न सक्छ । मानसिक समस्याबाट जोगिन खुलेर कुरा गर्नुपर्ने डा. कुँवर बताउँछन् । भन्छन, ‘यो रोग लुकाउँदा धेरै समस्या आउँछ । त्यसैले यसबारे खुलेर कुरा गर्न आवश्यक छ ।’
मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए पनि सरकारले यसका लागि एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट छुट्याएको छ । नेपालमा वर्षेनी करीब ५ हजार जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको र ८५ प्रतिशतले मानसिक रोगको उपचार नपाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क यतिमा मात्र सीमित छैन । १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका यूवाको आत्महत्याको मृत्युको दोस्रो कारणसमेत हो ।
मानसिक समस्याका ११ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । तर उचित प्रचार(प्रसारको अभावले गर्दा सो सेवा लिनबाट विरामी बन्चित भइरहेका छन् । मुलुकभर सरकारी १ र निजी ६ गरी ७ मानसिक अस्पताल रहेका छन् ।
Tagged पाटन मानसिक अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य
राष्ट्रपति भण्डारी र चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सीबीच भेटवार्ता
Tags: पाटन मानसिक अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य